Laalibalaatti kattaa soqanii bataskaana ijaaruun ammas itti fufeera - BBC News Afaan Oromoo
Laalibalaatti kattaa soqanii bataskaana ijaaruun ammas itti fufeera
Kaaba Itoophiyaatti kan argamtu magaalaan Laalibalaa waldaaleen Kiristaanaa kattaa soquun ijaaraman keessatti argamtudha. Waldaaleen Kiristaanaa adda ta'an kun bakkawwan seenaa hambaa addunyaa UNESCO'n galmaa'an keessaa tokkodha.
Waldaaleen Kiristaanaa kunneen kattaa tokko qofarraa karraafi foddaa akka qabaatan taasifamanii kan ijaaramaniifi tokko tokko hanga meetira 50 gadi fagaatu. Kan ijaaramanis jaarraa 12ffaafi 13 keessa ture.
Qorattoonni seenaa hedduun akka jedhanitti waldaaleen kiristaanaa kattaa soqanii hojjechuun kun waggoota 500 dura hafe.
Haa ta'u malee yeroo ammaa kanallee Kaaba Itoophiyaatti waldaa kiristaanaa akkasii kana bocuun ittuma fufee jira. Gabaasaan BBC Imaanu'eel Igunzaa gara Laalibalaatti imalee ture.
"Waamichi walii galaafi bocni waldaa kiristaanaa kun Waaqarraa naaf ifeeti" jedhu ga'eessi waggaa 40 Abbaa Gabira Masqal Tasammaa waldaa kiristaanaa isa haarawaa ijaaramaa jiruu naanna'ee nu agarsiisaa.
Naannoo sanattti walii galaan waldaalee kiristaanaa afur tokkoo tokko isaanii daandii lafa jalaan kan walitti ba'anitu jiru. Gorroon keessa isaanii fakkiiwwan addaa addaan miidhageera.
Abbaa Gabira Masqal Tasammaa luba waldaa kiristaanaa Ortoodoksii yommuu ta'an hojjettoota biroo sadii waliin ta'uudhaan dhakaa/kattaa soquun mana sagadaa tolchuuf guutummaa yeroo isaanii kennanii hojjetaa jiru.
"Kanan Laalibalaa Haarawaa jedhee osoon moggaasee jaaladhu waldaaa kiristaanaa kana hojjennee xumuruuf waggaa afur nutti fudhateera," jedhu.
Kattaa dho'insa ibiddaan uumame soquufi boca baasuuf qiyyii, qottoofi sooftuu akkasumas batoo ykn akaafaa naannootti argamu fayyadamneera.
"Adeemsa kanaan hojiin guddaan fiixee kattaa kanarraa soofaa/qotaa gadi bu'uudha. Kunis foddaawwan, karrawwaniifi ulaawwan sooquu dabalata," jedhu.
Lafa waldaaleen kiristaanaa kun itti bocaman ga'uudhaaf salphaa miti.
Bakka waldaan kiristaanaa tokko itti soqamee bocame daandii kattaa qabuun ga'uudhaaf saatii tokkoof deemuu nama gaafata.
Tokko tokko bakka fagootti waan argamaniif anga'oonni naannoo osoo hin hafiin waldaan kiristaanaa hojjetamaa jiraachuusaa yeroo dhaga'an ajaa'ibsiifataniiru.
Waldaaaleen kiristaanaa warri haarawaa bakki itti argaman kattaan ajaa'ibsiisaafi waldaaleen kiristaanaa beekamoo ta'an bakka jiran kaaba Itoophiyaa ta'ee naannoo Walloottidha.
Waldaaleen kiristaanaa 11 ta'an kattaa tokkorraa soquun jaarraa 12ffaa keessa ture kan hojjetaman.
Soquun hojjechuu kan barbaachiseefis amantoota lammii Itoophiyaa Jerusaalem deemuu hin dandeenyeef jecha mooticha Laaliibelaa bara isaatti hojjechiise.
Waldaalee kiristaanaa Laalibalaa waggoota hedduu lakkoofsisan keessaa kan baaxiin isaa bifa fannootiin ijaarame beekamaa kan ta'e Qiddus Goorgis ykn Bete-Goorgis akkasumas kattaa tokkicharraa ijaaramuun kan addunyaatti tokkoffaa ta'e Bete-Maariyaam waldaa kiristaanaa jedhamu dabalatee tokko tokko lafa jala hanga meetira 40 gadi fagaatu.
Oduu durii tokko tokko keessatti bara Mooticha Laalibelaa hojjetoonni biyya alaatii dhufan yeroo guyyaa guyyaa hojjetan ergamoonni ammoo galgala akka hojjetaa turan seenessu.
Abbaa Gabira Masqal Tasammaa garuu kana hin fudhatan, waldaa kiristaanaa haarawaa kana hojjechuudhaaf ka'an waldaaleen kiristaanaa Laalibalaa namoota Itoophiyaa Waaqayyoon gaggeeffamaniin akka hojjetaman agarsiisuuf akka ta'e dubbatu.
"Itoophiyaan kana raawwachuudhaaf beekumsaafi ogummaa kana fakkaatu hin qabdu ture kan jedhan tokko tokko turan."
"Haa ta'u malee ani amma yeroon hojjedhu namni tokkoyyu waan tokkollee na hin agarsiifne, hojii ajaa'ibsiisaa kana kanan dhugoomse gaggeessaa Afuura Waaqayyootiin,'' jedhu.
"Waldaaleen Kiristaanaa haarawaa Kaaba Itoophiyaatti argamaa jiraniif bu'uurri Hafuura qulqulluudha,'' jechuun kan ibsan barsiisaa Yunvarsiitii Toroontoo Piroofeesar Maayik Gerversidha.
Piroofeesar Maayik ogeessota ijaarsa gamoofi fiilmii waliin ta'uudhaan ogummaa ijaarsaa badaa jiru kana galmeessanii kaa'uudhaaf hojii tokko jalqabaniiru.
Biyya Yuunaayitid Kingidam kan ta'e Arkeediyaa Fandi kan jedhamuun yoo deggarameef karoorri isaanii kuusa odeeffannoo haarawaa qopheessuun uummataaf banaa gochuudha.
"Waldaalee kiristaanaa kattaa soquun hojjechuun kan itti fufu yoo ta'e, ammayummaan yeroo baballachaa deemu meeshaa ittiin soqan fayyadamuu waan eegalaniif ogummaa harkaatiin hojjechuun guutummaan guutuutti bada," jedhu.
"Kana waan ta'eefis bakka ijaarsa tokkoo gara bakka biraa deemuun ogeessota beekumsa ijaarsaa kana qaban akkamitti akka hojii isaanii itti rawwatan beekumsa dhuunfaa qaban ni galmeessina. Kaayyoon keenyas odeeffannoo argan uummataaf banaa gochuudha.
"Caalmaatti yeroo barbaadaa deemnu dabalataan arganna. Waldaaleen kiristaanaa hedduun akka jiran waan amannuuf kan biroo argannee akka galmeessinu abdiin qaba."
"Waldaaleen kiristaanaa katta soquun hojjetaman al takkaa hojii jalqabnaan yeroo baay'ee suphaa hin barbaadan. Waggoota kumaaf tajaajila kennuu ni danda'u," jechuun ibsu piroofesar Gervees.
Abbaa Gabiramasqaliif garuu hojiin waldaalee kiristaanaa ijaaruu isaanii, ogummaa qabaachuu mirkaneessuu caalaa hiika biraa qaba.
"Waldaaleen kiristaanaa kun banamanii namoonni naannoo kootii sirna waaqeffannaa keessatti raawwachuu isaanii amman argutti ariifadheera. Yeroo dhiyootti... baay'ee yeroo dhiyootti manneen Waaqayyoo kunneen namoota gagammadootiin ni guutamu,'' jechuun gammachuudhaan ibsan.